होटल रेस्टुरेन्ट ब’न्द गर्ने सरकारको नि’ष्कर्ष सहि कि गलत ? आफ्नो विचार राख्नुहोला । – Nepal Online Khabar
August 4, 2020 47
img src=”https://nepalonlinekhabar.com/wp-content/uploads/2020/08/Logopit_1596462375109.jpg” alt=”” width=”1280″ height=”720″ class=”alignnone size-full wp-image-11465″ />
Prevनक्सा जारी गरेपछि बाँकी कामको लागि सरकारले देखाएन हतारो, भारत झनै मौन…हेर्नुहोस् ।
Nextनारायणकाजी श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ: प्रधानमन्त्री केपि ओलिले अरुको कुरा पनि सुन्नै पर्दछ! वि वाद मिलाउनै पर्दछ…हेर्नुहोस!
म्यान्मार कू: ‘सबै ठिक हुन्छ’ भन्दै म्यान्मारको आन्दोलनमा उत्रिएकी एक किशोरीले गोली लागेर ढल्नुअघि के-के गरिन्